Akasekho noyedwa udokotela wesomdlavuza kwezaseThekwini | News24
Akasekho noyedwa udokotela wesomdlavuza kwezaseThekwini
Durban - Akasekho noyedwa udokotela wesifo somdlavuza osele ezibhedlela zikahulumeni eThekwini.
Udokotela wokugcina ushiye phansi umsebenzi ngoLwesihlanu.
Labo dokotela bathi abakwazi ukuqhubeka nokusebenza ngenxa yezinsiza ezingekho esimeni esikahle ukuthi bangakwazi ukuqhuba umsebenzi.
OLUNYE UDABA: Isililo kushona udokotela nonesi eThekwini
UNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal uSibongiseni Dhlomo uthe umnyango usiqaphile isimo ukuqinisekisa ukuthi iziguli ezinesifo somdlavuza ziyakuthola ukwelashwa okufanelekile.
"Sinalo ithimba lodokotela besifo somdlavuza elisasebenza esibhedlela iGrace, esiseMgungundlovu," kusho uDhlomo.
"Yingakho, ngale kwezinye izinto, okuhleliwe wukuthi sicele ukuthi baseseke emahoreni angeziwe okusebenza ukuba beze esibhedlela esiseThekwini iNkosi Albert Luthuli Central lapho okusule khona udokotela wokugcina.
"Odokotela abathathu abasebenza ezibhedlela ezizimele bavumile ukusilekelela lapho abangakwazi khona," kusho uDhlomo.